आखिर महिलाको शर्टको बटन बायाँतिर नै किन हुन्छ ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
आखिर महिलाको शर्टको बटन बायाँतिर नै किन हुन्छ ?
तपाईले कहिल्यै नोटिस गर्नुभएको छ कि, पुरुष र महिलाको शर्टको बटन किन कुन साइटमा हुन्छ ? यदि याद गर्नुभएको छैन भने याद गर्नुहोस्, महिलाको शर्टको बटन जहिल्यै बायाँतिर नै हुन्छ । तर पुरुषको शर्टको बटन दायाँतिर नै हुन्छ । अब तपाईलाई यस्तो किन हुन्छ, भन्ने लाग्यो होला । यसमा विभिन्न तर्कहरु दिइएका छन् ।
भनिन्छ, पुरुषले बटन खोल्न र लगाउन बायाँ हातको प्रयोग गर्दछन् । त्यसैले उनीहरुको शर्टको टाँक दायाँतिर हुन्छ भने, महिलाहरु यसको उल्टो गर्दछन् । त्यसैले उनीहरुको सजिलोका लागि टाँक बायाँतिर हुन्छ ।
अर्को तर्क भनेको पहिलाको जमानामा महिला घोडा चलाउँथे । त्यो बेला उनीहरु बायाँतिर बटन भएको शर्ट लगाउँथे । किनभने हावाको कारण शर्ट नखोलियोस् । त्यसपछि यो कन्सेप्ट सधैँका लागि रह्यो । र, मेकर्सले यस किसिमको शर्ट बनाउन थाले । यो पनि भनिन्छ कि पुरुष दायाँ हातमा तरवार लिन्थे । त्यस्तै महिला बच्चालाई आफ्नो काखमा राख्नको लागि बायाँ हातको प्रयाग गर्दथे । त्यसैले उनीहरुको सजिलोका लागि बायाँतर्फ नै बटन लगाइयो ।
किनभने उनीहरु दायाँ हातले शिशुलाई स्तनपान गराउन सकुन् । यसमा एक वाक्य नेपोलियन बोनापार्टसँग पनि जोडिएको छ । उनलाई आफ्नो हात शर्टभित्र राख्न मन लाग्दथ्यो । त्यो देखेर महिलाहरुले पनि उनकै जसरी स्टाइलमा शर्टको टाँक राख्न थाले । त्यसपछि नेपोलियनलाई यो कुरा मन परेन र उनले आदेश दिँदै अब महिलाको हात सिधाको साटो उल्टो होस् भने । त्यसपछि यस्तो गर्न थालिएको बताइन्छ ।